သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ...: မြန်မာ့အရေးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခု ပျံ့နှံ့နေသည်……
မြန်မာ့အရေးကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခု ပျံ့နှံ့နေသည်……
တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ အကြောင်းကြားချက်နဲ့ Email စာတစ်စောင်တစ်စောင် ၀င်လာရင် Email မှာပါလာတဲ့ Attached File ကို လုံးဝ (လုံးဝ) မဖွင့်မိဖို့ Sophos အမည်ရှိ ကွန်ပြူတာလုံခြုံရေး နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုက သတိပေးထားပါတယ်.
အဲဒီ့ Email မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်မှုတွေကို ခံနေရတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ထောက်ပံ့ကူညီဖို့ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားက မေတ္တာရပ်ခံထားပြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ မူရင်းစာကို Attached File မှာ ဖွင့်ကြည့်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်.
အဲဒီ့ ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ရင် ထရိုဂျန်အမျိုးအစား ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာအတွင်း ၀င်ရောက်လာပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စကားဝှက်တွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေ၊ ဘဏ်စာရင်းနံပါတ်တွေကို ယူသွားလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်
ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်တဲ့ Attached File ရဲ့ အမည်ကတော့ ddhl burma_001.dot ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို နအဖက ငှားရမ်းထားတဲ့ ရုရှက ကွန်ပြူတာ ဟက်ကာများက ဖြန့်ဝေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်. မကြာသေးခင်ကပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ချို့ သူတို့ရဲ့ Email ကို ၀င်ကြည့်ခံရတယ်လို့ သတိပေးပါတယ်. ဒါဟာ မြန်မာဘလော့ဂါတွေကို အစီအစဉ်ကျကျနဲ့ ဖျက်ဆီးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်. ဒီသတင်းကို နီးစပ်ရာ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ မျိုးချစ်မြန်မာလူငယ်များကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်.
Posted by Yan at 8:17 PM